Myanmar OA6: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြို့တော် (သို့) ကျွန်တော်သိတဲ့ နေဘုန်းလတ်
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး အရမ်းကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ခံစားချက်လေး ဖြစ်မိတယ်.. Happy Birthday again ကိုနေဘုန်းလတ်ကြီးရေ.. ထပ်နှုတ်ဆက်တာ.. ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ..
>> မောင်ပွတ်..အရေးအသားကတော့ ထိတယ်.. မျက်လုံးထဲမှာ ကိုနေဘုန်းလတ် အကြောင်း..စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို မြင်လာအောင်ရေးနိုင်တယ်.. တော်တယ်..
ကျေးဇူးပါ မောင်ပွတ်ရေ ... မင်းရဲ့ birthday cake , birthday wish at the early morning and the birthday present တွေအတွက် ...။
မွေးနေ့အရှင်ကြီးရေ .. ဟက်ပီဘက်ဒေးဗျာ
မောင်ပွတ်ရဲ့ အရေးအသားကတော့ ကောင်းပ။ ကဲ . .သူငယ်ချင်းနေဘုန်းလတ်ရေ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ အကို့ရဲ့ ဘလော့ခ်မှာလဲ bd wishလုပ်ထားပါတယ်။
အရေးအသားကောင်းပါ့ဗျာ... ဖတ်နေရင်းနဲ့ နေဘုန်းလတ်ကို မြင်လာတယ်ဗျာ...
မောင်ပွတ်ရေ.. အရေးကတော့ ကိတ်မုန့်ထက်တောင် ချိုသကွ...
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ ကျွန်တော် လွတ်ကျသွားတဲ့ ကိတ်မုန့်ကြီး...
အဲလေ... ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ နေဘုန်းလတ်...
မောင်ပွတ်ရဲ့ သံယောဇဉ်ကတော့ နေဘုန်းလတ်သာ ကောင်မလေးဆိုရင် ….
ဖုတ်.ဖုတ်.ဖုတ် (ကြွေသွားတဲ့ အသံ)
အင်း ညီမရှိရင် ဆိုပြန်တော့ လဲ
တဘက်ကို ညီအစ်ကို ၃ယောက်စီဆိုတော့ လဲ
ဟိဟိ ဒီပွဲ သားရေပဲတဲ့
ကိုနေဖုန်းလတ်ရေ မောင်ပွတ်ရေးထားတာ ကြွှေသွားတာနဲ့ ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်- (မှတ်ချက်- အမှန်တော့ အဲ့ဒီလူ စာတွေမပြီးလို့ ဖါးတာ ကျနော်သိတယ်-) ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွှေးနေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ လွတ်ကျသွားတဲ့ မြို့တော်ကြီးမှာ အတူတကွ တွေ့ပြီး တမြို့ထဲ သားတွေ ဖြစ်လာရတာ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်- လွတ်ကျသွားတဲ့ မြို့ထဲမှာကော တကယ်နေ နေရတဲ့ မြို့ထဲမှာကော ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာ နေနိုင်ပါစေ....
ကိုနေဘုန်းလတ် သိမ်းပိုက်ချင်တဲ့ မြို့တော် ရှိရင်လည်း အမြန်ဆုံး သိမ်းပိုက်နိုင်ပါစေဗျာ..
ကိုပွတ်ကလည်း အရေးအသား တယ်ကောင်းကိုးဗျာ..
မောင်ပွတ်ရေးတာ ဖတ်ပြီး ၊ နေဘုန်းလတ်တော့ မသိ .. အမတော့ မင်းရဲ့ နေဘုန်းလတ်ပေါ်ထားတဲ့ ခင်မင်မှုတွေကို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် မြင်လိုက်တယ်း)